Ummanni Oromoo tasgabbaa'ee qabsaa'uu qaba, Dr. Abiyi - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Magaalota Oromiyaa keessatti suuqiiwwan cufamaniiru
Lagannaan gabaa fi mormiin guutummaa Oromiyaatti kaleessa jalqabe guyyaa lammaaffaaf itti fufee oluusaa jirrattoonni magaalootaa tokko tokko irraa dubbifne BBC'tti himan.
Haa ta'u malee, Motummaan naannoo Oromiyaa dhimmicha ilaalchisuun ibsa dhaabbata midiyaa OBN'f har'a kenneen, uummanniifi dargaggoonni har'aa kaasanii sochii kana dhaabsisuun barabaachisaa ta'a jedheera.
Sadarkaa I/A Pirezidaantii MNOtti Itti gaafatamaan Waajjira giddu galeessaa DhDUO Dr. Abiyi Ahimad ibsa yeroo ilaalchisuun OBN'f kennanniin,biyya tokko keessatti uummanni gurmaa'ee karaa nagaan mootummaa ofii dirqisiisuu, dhiibbaa irratti geessisuun gaaffii garagraa kaasuun sirna diimokiraatawaa keessatti baayee murteessaadha jedhaniiru.
Haa ta'u malee kunis karaa biyyaa fi ummataarra miidhaa hin qaqqabsiifneen ta'u qabaata.
Lagannaa gabaatiin walqabatees gaaffiiwwan ka'aa jiran keessaa tokko, namoonni hidhaman gadi yaa dhiifaman kan jedhu ta'uu kan eeran Dr. Abiyi, kun ammoo hojii mootummaan naannichaa xiyyeeffannoodhaan irratti hojachaa jiruudha jedhaniiru.
Aangoo mootummaa naannichaa jalatti hidhamtoota kuma 30 ol hiikuus dubbataniiru. Gama mootummaa federaalaatiini, ''hojiin hojjetame jira. Namoonni harka mootummaa federaalaatti dhimmi isaanii ilaalamaa jiru walakkaa ol himannisaanii addaan citee akka hiikaman ta'eera. kun ga'aadha jennee hin fudhanne. Kanneen hafanis akka ba'aniif qabsoofnee walii galuudhaan namoonni kun akka gadhiifaman murtaa'eera. Kunis hatattamaan xumurama'' jedhaniiru.
Kanaafu mormiin kun safartuu kamiinuu fudhatama hin qabu, jedhaniiru.
Haa ta'u malee namoota hiriiraaf bahan nageenya isaanii akka eegamuuf Poolisiin Oromiyaa dirqamasaa bahuu qaba, bahaas jira jedhan. Humni nageenya eegsisu meeshaa ummatatti dhukaasuun osoo hin taane ummatatti dhiyaachuun tasgabbiidhaan olaantummaa seeraa kabachiisuutu irraa eegama jechuun Miidiyaa OBNtti himaniiru DR. Abiyyi.
Sababii isaa yoo eeran, ''namoonni nagaan bahanii nagaan galuu qabaatu, hiyyeessi jireenya gadaanaa jiraatu hojetatee nyaachuu qaba.waan ta'eef.
Gaaffilee amma kana'aniifi dhimmoota biraarratti MNO xiyyeeffannaan hojjechaa jira. Murteerras ga'ameera. Kanaaf dargaggoonni keenya tasgabba'anii eeguu qabu jechuun waamicha dabarsanii jiru.
Namni xiyyaara Itoophiyaan imalaa ture 'boombii sobaan' imaltoota jeeqe